जिज्ञासाः कुन समयमा यौन सम्पर्क राख्दा गर्भ बस्छ? – Everest Dainik – News from Nepal
जिज्ञासाः कुन समयमा यौन सम्पर्क राख्दा गर्भ बस्छ?
काठमाडौं । गर्भ धारणका लागि कति पटक र कसरी सेक्स गर्ने भन्ने जानकारी भयो भने महिनौं कोसिस गर्नु पर्दैन । आफ्नो योजनाअनुरूप सहजै गर्भधारण गर्न सकिन्छ । दम्पतीलाई यस्तो कुराको जानकारी नभएको स्थितिमा समस्या समेत सिर्जना हुनसक्छ । उसो भए गर्भधारणका लागि कुन बेला, कति पटक र कसरी सेक्स गर्ने?
कसरी रहन्छ गर्भ?
जब पुरुष प्रजनन कोष ‘शुक्रकीट’ को महिलाको गर्भाशयमा अवस्थित अण्डसँग मेल भएर त्यसलाई फर्टिलाइज गर्छ तब मात्र कुनै पनि महिला गर्भवती हुन्छिन् ।
कति पटक राख्ने सम्बन्ध?
एउटा पेरेन्टिङ वेबसाइटले १ हजार १ सय ९४ दम्पतिमाथि अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन सन्तान चाहने दम्पतिमाथि गरिएको थियो । अध्ययनमा उनीहरूले गर्भधारणका लागि कति पटक सेक्स गरेका थिए भन्ने कुरा जान्न प्रयास गरिएको थियो ।
गर्भधारणका लागि कुन आसन राम्रो?
कतिपय मानिसमा के विश्वास छ भने गर्भधारण आसनमा पनि निर्भर हुन्छ । यसका लागि लगभग तीन चौथाइ मानिस मिसनरी पोजिसन (महिला तल र पुरुष माथि सुतेर गरिने यौन आसन) लाई उपयुक्त माने भने ३६ प्रतिशत जोडीले डगी स्टाइल पछ्याए ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार महिनावारी (डिम्ब निष्कासनको समय) थाहा पाउनु र डिम्ब निष्कासनको पाँच दिनअघि तथा त्यसै दिन सेक्स गर्दा गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ ।
डिम्ब निष्कासन के हो?
डिम्बको आयु कति?
डिम्ब निष्कासन प्रक्रियामा निस्किएको डिम्ब १२ देखि २४ घन्टासम्म फर्टिजाइज हुनसक्छ । सेक्सका क्रममा प्रवेश गरेको पुरुष शुक्रकीट महिला प्रजनन प्रणालीमा ५ दिनसम्म पनि रहन सक्छ ।
कहिले हुन्छ डिम्ब निष्कासन?
ट्याग्स: गर्भ, यौन सम्पर्क
रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाहीदेखि एनजीओहरु हराएको सूचना
कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन कुकुरलाई तालिम
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका महत्वपूर्ण ६ निर्णय
थप ८ दिन ‘लकडाउन’ लम्बाउने सरकारको निर्णय